Mpanamboatra Attenuator & mpamatsy | China Attenuator Factory
ST raikitra vehivavy amin'ny Attenuator Optic Fibre lahy
Atenuator optika raikitra dia ampiasaina amin'ny rohy fibre optika hampihenana ny herin'ny optika amin'ny ambaratonga iray. Attenuator fibre optika mahazatra dia ny sokajin-dehilahy, izay antsoina koa hoe fibre attenuator. Miaraka amina ferrule vita amin'ny seramika izy ireo ary misy karazany isan-karazany mifanaraka amin'ny karazana mpampitohy fibre optika. Ny fibre optic attenuator manara-penitra dia afaka mampihena ny herin'ny optique amin'ny haavo voafaritra, ny fibre optic fibre variable dia miaraka amina faritra azo ovaina. Endri-javatra ♦ Malalaka ...
SC Attenuator Optika raikitra
MU Mpanaraka Optical fibre Attenuator lahy ka vavy
Atenuator optika raikitra dia ampiasaina amin'ny rohy fibre optika hampihenana ny herin'ny optika amin'ny ambaratonga iray. Attenuator fibre optika mahazatra dia ny sokajin-dehilahy, izay antsoina koa hoe fibre attenuator. Miaraka amina ferrule vita amin'ny seramika izy ireo ary misy karazany isan-karazany mifanaraka amin'ny karazana mpampitohy fibre optika. Ny fibre optic attenuator manara-penitra dia afaka mampihena ny herin'ny optique amin'ny haavo voafaritra, ny fibre optic fibre variable dia miaraka amina faritra azo ovaina. Seho midadasika amin'ny ...
LC Attenuator Optical Fiber Fixed Male to Female
Attenuator optika miovaova
Ny atenuator optique in-line variant (VOA) dia ahitsy amin'ny tanana, ampiasaina amin'ny fandanjana tsara ny tanjaky ny signal amin'ny faribolan'ny fibre, na ny fandanjana signal optika rehefa manombatombana ny halaviran'ny rafitra fandrefesana. Endri-javatra ♦ fibre vita amin'ny ionona metaly ♦ Faharetan'ny loharanom-pahefana mahery ♦ Fahaleovan-tena amin'ny halavany ♦ Haavo antenuation manomboka amin'ny 1dB ka hatramin'ny 25dB ♦ 1310nm, 1550nm sy 1310 / 1550nm ny halavan'ny onja roa Fampitaovana ♦ Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFA) ♦ Dense Wave Division M. ..
Attenuator miovaova optique, karazana adapter, 0 ~ 30 dB fanalefahana, 1310 & 1550nm, varavarankely roa, FC / PC. FAMPIANARANA Tambajotram-pifandraisan-davitra EDFA CATV Networks famaranana fitaovana mavitrika FAMPIANARAM-PAHASALAMANA Fomba fihenam-bidy marin-toerana rafitra miendrika keramika miendrika rafitra tsotra sy azo itokisana SPECIFICATIONS Characteristics Conditions Values ​​Filter Air Gap Attenuation range 0 ~ 50dB 0 ~ 28dB Resolution 0 ....
FC Attenuator Optika raikitra
Atenuator optika raikitra dia ampiasaina amin'ny rohy fibre optika hampihenana ny herin'ny optika amin'ny ambaratonga iray. Attenuator fibre optika mahazatra dia ny sokajin-dehilahy, izay antsoina koa hoe fibre attenuator. Miaraka amina ferrule vita amin'ny seramika izy ireo ary misy karazany isan-karazany mifanaraka amin'ny karazana mpampitohy fibre optika. Ny fibre optic attenuator manara-penitra dia afaka mampihena ny herin'ny optique amin'ny haavo voafaritra, ny fibre optic fibre variable dia miaraka amina faritra azo ovaina. Toetoetra ...